IBig Cartel: I-ecommerce yabaculi | Martech Zone
NgeSonto, uJanuwari 26, 2014 NgeSonto, uJanuwari 26, 2014 Douglas Karr
Isungulwe ngo-2005 ukusiza ababambisene nabo ukuthengisa izimpahla zeqembu lakhe, I-Big Cartel manje sekuhlala abaculi abazimele abangaphezu kuka-400,000 emhlabeni jikelele. Ipulatifomu yabo ye-ecommerce yakhelwe ngqo ukusiza abadali ukuthi bathole imikhiqizo yabo online. Nayi ividiyo evela kwelinye lamakhasimende abo, Phila Impi Isikhathi Eside, umklami wezingubo.
I-Big Cartel inikeza izinzuzo nezici ezilandelayo:
Ukusetha okusheshayo - Thola isitolo esilula ku-inthanethi ngemizuzu.
Easy ukusebenzisa - banikela ngeplatifomu elula elula ukuyisebenzisa.
Ukucabanga ngebhizinisi - Ukubika nokuhleleka kokuphathwa.
Umkhiqizo - Kulula ukwenza ngokwezifiso okuthuthukile ngaphandle kokufaka amakhodi okudingekayo. Abasebenzisi bangakhetha izingqikithi ezenziwe ngaphambilini futhi benze ngezifiso kalula izithombe, imibala, namafonti.
Izizinda zangokwezifiso - Sebenzisa noma isiphi isizinda ongasinika isitolo sakho i-URL yangokwezifiso.
Phatha ukuhlelekas - indawo yokuphathwa kwe-oda nama-imeyili wokuqinisekisa ukuhleleka ongakwenza ngezifiso.
Injini yokusesha ithuthukisiwe - Izitolo zenzelwe izinjini zokusesha, ngokuya ngezincomo zeGoogle.
Izibalo nezibalo - qapha umsebenzi wesitolo nokukhula ngezibalo zedeshibhodi yesikhathi sangempela nokuhlanganiswa kwe-Google Analytics.
Amakhodi esaphulelo - Amakhodi esaphulelo anikela ngezindlela ezahlukahlukene zokumaketha imikhiqizo emisha, ukukhuthaza isitolo sakho, nokuvuza abathengi abathembekile.
Imikhiqizo yeDaily - thengisa ubuciko bedijithali, umculo, amavidiyo, amafonti, izithombe, ama-eBooks, neminye imikhiqizo engalandwa ngomsebenzi wethu odidiyelwe, isondo lokugijimisa indiphi elenzelwe into esindayo.
Thengisa ku-Facebook - Faka isitolo sakho kunoma iliphi ikhasi le-Facebook bese uxhuma abalandeli bakho kwimikhiqizo yakho ngohlelo lwethu lokusebenza lwe-Facebook oluhlanganisiwe.
Ukuphuma kweselula - Thengisa izimpahla zakho ngqo kusuka ku-iPhone yakho nge Uhlelo lokusebenza lwe-Big Cartel.
Tags: ibhokisi elikhuluisitolo sokulanda kwidijithaliezokuhweba ngekhompyuthai-ecommerce yabaculipulleythengisa ubuciko onlinethengisa imfashini online
Izinqumo Ezi-5 Zokumaketha Ku-inthanethi Zango-2014